Moments leh saaxiibo 3
Waraaq ay dhowaan heshay, saaxiib ayaa waydiinaysa: Waa maxay sababta ay u fiicantahay in jidhka la qabadsiiyo geerid kaddib halkii lagu aasay?
Waxaa jira sababo badan oo horumarsan in la gubo. Kuwaas waxaa ka mid ah in gubashadu nadiif ka tahay, nadaafad badan, u baahan tahay qolal yar, oo aan lahayn cudurro, sida had iyo jeer ka soo baxaan qabuuraha, iyo kuwa nool dhexdooda. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa in ay horumarisay Theosophists, taas oo ah, in geeridu tahay gudbida mabaadii'da sareysa, oo ay micnaheedu tahay in jirka looga tago guri madhan. Ka dib marka nafta bini aadamka ay ka goyso hadhaaga, waxaa ka haray jirkii astraatka, kaas oo siiyay oo xafidey qaab dhismeedka jirka, iyo jirka rabitaanka. Astral-ka ama qaab-dhismeedka jirka ayaa ku xeeran, wuxuuna soconayaa ilaa, jirka, uu u baaba'o sida jirku u baaba'o. Jirka rabitaanku, hase yeeshe, waa awood firfircoon oo awood u leh inuu wax yeelo u yeesho si la mid ah maaddaama ay damacyadu ahaayeen kuwo xun ama kuwo nolosha wada nolosha ah. Jirkaan rabitaankiisu wuxuu sii jiri karaa boqolaal sano hadii damacyada ay ka koobantahay ay xoog yeelan karaan, halka jirka jir ahaaneed uu sanado is barbar dhigo. Jirka rabitaanku waa vampire xooggiisa soo jiidata, marka hore ka soo hadha hadhaaga labaadna jirka kasta oo nool oo siin doona dhagaysi, ama qiraya jiritaankiisa. Jidhka rabitaanku wuxuu ka helaa nafaqada jidhka dhintay iyo astral jirka, laakiin haddii jidhka jidhku duubo oo ka fogaado waxa kor ku xusan oo dhan. Taasi waxay baabi'isaa xoogagga jir ahaaneed, waxay ku faafiyaa jirkeeda astral, waxay u xallisaa waxyaalahan xubnihii ay soo jiitey dhalashada kahor iyo inta ay ku nool yihiin adduunka, waxayna maskaxda u saamaxdaa inuu si sahal ah iskudhaafsado rabitaanka jirka una gudbo nasasho taas oo diintayda ugu yeedhaan jannada Uma qaban karno shaqo ka weyn kuwa aan jecel nahay iyo nolosha noloshan ka dhaafaysa in jirkooda la dubo si aan uga yareynno daruuriga ay u leeyihiin inay ka xiraan xuubka dhimashada iyo argagaxa qabriga.
Ma jiraan wax run ah oo sheekooyin ah oo aan akhrino ama maqalno, ku saabsan vampires iyo vampirism?
Waxaan ku nool nahay da 'iskucelcelis ahaan aad u cilmi badan oo u oggolaanaysa inay jiraan wax run ah sheekooyinka xanaano-maalmeedka warbaahinta sida kuwa vampires. Laakiin, si kastaba ha noqotee, runtu weli way jirtaa, rag badan oo cilmiyaysanna, oo ka cimri dheeraaday sannadihii cambaareynta, ayaa noqday kuwa aad ufiican marka loo eego kuwa ugu sharafta badan markay waayo-aragnimo u leeyihiin qoob-ka-ciyaarka; ka dib waxay ahayd waqtigooda inay la kulmaan cayda iyo jibiska saynisyahano kale. Faa'iidada ugu weyn ee shacbiyad ahaan baahsan ee ku saabsan jiritaanka hoosaadka iyo jaangooyooyinka 'super-mundane', ay tahay in ay ka qaaddo fikirka caanka ah sheekooyinka goblins, ghouls, iyo vampires, iyada oo lagu caayo waxyaalahaas oo kale. Sidaa darteed wax yeeleynta taranka ayaa ka yar qarniyadii dhexe markii qof walbaa uu rumeysan yahay sixirka iyo sixirka. Vampires wali way jirtaa wayna sii socon doontaa samayska iyo sii noolaanshaha ilaa inta aadamuhu ku nool yahay nolosha fiendish, oo ay ku dhexjiraan fikirka iyo rabitaanka Dili cadaawayaashooda, khiyaanooyinka masaakiinta iyo masaakiinta ah, baabi'iya nolosha saaxiibadood, waxaadna u huraysaa kuwa kale damacyadooda naftooda iyo kuwa xunba. Markuu bini aadamku leeyahay damacyo xoog leh iyo awood aqooneed oo leh damiir ama qallooc damiir leh, wuxuu ku nool yahay nolosha isxilqaannimada, uma u naxariisto dadka kale markii damacyadiisu ay danaynayaan, wuxuu ka faa'iidaystaa macaamil kasta oo ganacsi, iska indhatira caqliga suuban, iyo kuwa kale damacyadiisa qaab kasta oo caqligiisa uu ku ogaan karo: ka dib markay dhimato ninkanu dhimashadiisa waxaa la abuuraa dhimashada ka dib, waxa loogu yeedhaa jidh damac, xoog iyo xoog ba'an. Tani aad ayey uga duwan tahay qaabka astralka ee ku wareegsan jirka haray. Jirka noocan oo kale ahi wuu ka xoog badan yahay kan celceliska qofka waana ka awood badan yahay, maxaa yeelay fikradaha inta lagu jiro nolosha waxay ku urursanaayeen damacyada. Jirka rabitaanku wuxuu markaa noqonayaa vampire taas oo ay ku kalifto dadka oo dhan albaabka u furi doona nolosha, fikradaha, iyo damacyadiisa, iyo kuwa sifiican ugu tabar daran ee u oggolaanaya vampire-ka inuu ka adkaado caqligooda suuban. Sheekooyinka naxdinta leh ayaa loo sheegi karaa waaya-aragnimada dad badan oo xoolo u ahaa vampire. Jirka kuwa sida nolosha ku noolaa vampire waxaa badanaa laga heli karaa mid cusub, xiriir ah, hilibkuna wuxuu noqon doonaa kuleyl sanado kadib qabriga. Tani waxay si fudud macnaheedu tahay in jirka rabitaanku mararka qaar xoog badan yahay si uu ula xiriiro jidhka jirkiisa astral, iyo inuu ilaaliyo qaab dhismeedka jirka, noloshiisa waxaa lasiiyaa nolosha laga soo qaatay jirka bini aadamka ee loo yaqaan 'Vampire' ama rabitaanka jirka. Gubista jidhka gubashadu waxay meesha ka saaraysaa suurtagalnimada in vambiil aadanaha lagu keydiyo jirkiisa jirka iyo nolosha laga soo qaado kuwa nool. Jirka bini’aadamka, in alla inta uu yahay kaydka ama guriga bakhaarka, waa la burburiyey oo jirka rabitaanku ma awoodo inuu isla markiiba qaato nolosha kuwa nool waxaana laga horjoogsaday inuu soo dhowaado xiriirkooda.
Maxay tahay sababta dhimashada degdegga ah ee dadka haddii ay da 'yar yihiin ama noloshu tahay nolol caadi ah, marka ay u muuqato sanooyin badan oo faa'iido iyo korniimo, maskax iyo jir ahaan, ka hor iyaga?
Markay naftu nolosha gasho, waxay leedahay cashar qeexan oo lagu baran karo, markay tahay barashada ay ku gudbi karto haddii la doonayo. Muddada casharka nolosha gaarka ah loo baahan yahay in la barto, waxay noqon kartaa dhawr sano ama waa la kordhin karaa boqol, ama casharka lama wada baran karo gabi ahaanba; oo naftuna waxay ku noqotaa dugsiga mar labaad iyo mar labaad ilaa ay ka barato casharkaas. Mid ayaa laga yaabaa inuu wax ka sii barto shan iyo labaatan sano ka badan midka kalena wax ku baran karo boqol. Nolosha adduunku waa ujeedka laga leeyahay helitaanka aqoon dhawrsanaanta weligeed ahaanta. Nolol kastaa waa inay sare u qaaddaa nafta hal darajo ugu dhaw is-aqoonta. Waxa inta badan loo yaqaan shilalka waa si fudud lagu fuliyo si faahfaahsan sharciga guud. Shilka ama dhaca ayaa ah kaliya hal meelood oo yar oo wareeg ah oo ficil ah. Shilka loo yaqaan ama arkay, ayaa kaliya ah sii wadista iyo dhammaystirka sababaha aan la arki karin ee ficilka. Si dhib leh sida ay u ekaan karaan, shilalka waxaa had iyo jeer sababa fikradaha uu qofku abuuro. Feker, ficil, iyo shil ayaa noqdey wareegga buuxa ee sababta iyo saamaynta. Qaybtaas wareegga sababta iyo saamaynta ee isku xira sababta keentay natiijada waa ficil, oo noqon kara mid muuqda ama aan muuqan; iyo qayb ka mid ah wareegga sababta iyo saamaynta taas oo ah saamaynta iyo natiijada waxa sababa, waa shilka ama dhaca. Shil kasta waa loo raadsan karaa sababteeda. Haddii aan helno sababta ugu dhakhsaha badan ee shilalka wax walba waxay si fudud uga dhigan tahay in waxa sababay dhawaan, taas oo macnaheedu yahay inay tahay kaliya wareegga yar ee fikirka, ficilka, iyo saameynta, taasoo dhowaan; laakiin marka shilka ama saameynta go'doominta ay go'doomiyeen oo uusan qofku awood u lahayn inuu mar uun arko isagoo ka horraynaya sabab, tani waxay si fudud uga dhigan tahay in wareegga fikirku uusan ahayn wareeg yar, oo sidaas darteed uu dhowaan yahay, laakiin loo gudbey wareegga weyn, Fikirka iyo ficilkaba oo laga heli karo nolosha hore ama waxkastoo nolosha ka horeeyey.
Haddii ciribta lugta, lugta, ama xubin kale oo jidhka ah aan la jarin marka xubnaha xubinta jidhka la gooyo, maxay tahay sababta jidhka cirrigu ma awoodo in uu soo saaro gacan ama lug kale oo jidhka ah?
Su'aashani waxay u muuqan laheyd in lagu waydiiyo mala awaal ahaan in jirka astral uusan jirin, sida hadii uu jiro waxay soo saari kartaa xubin kastoo jirka ah markay lumiso, qaasatan sida ay sheeganayaan dhamaan reer Theosophist in arinta jirka ay kudhisan tahay jirka bini aadamka sida uu qabo naqshadeynta jirka gudaha ama astral. Laakiin sharraxaaddu waa mid aad u fudud. Waa inuu jiraa dhex-dhexaad jir ahaaneed oo arrinta jir ahaaneed loo beddelo arrimo kale oo jireed sidoo kalena waa inuu jiro jir u socda mid kasta oo ka mid ah diyaaradda ay ku shaqeynayso. Dhex-dhexaadiyaha jirka ayaa ah dhiigga, kaas oo cuntada loogu beddelo jidhka. Qaabka loo yaqaan 'linga sharira' waa qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka, halka jirka jir ahaaneed uu ka kooban yahay unugyada unugyada. Hadda inkasta oo gacanta astral-ka aan inta badan la jarin markii xubin jirka ah la goynayo, ma jiro dhexdhexaad jir ahaaneed oo arrimaha jirka la xiriirin karo oo lagu dhisi karo arrimaha jirka. Sidaa daraadeed, in kastoo gacanta astral jirku jiro, ma awoodo inuu u gudbiyo sheyga jirka naftiisa maxaa yeelay majiro meel dhexe oo jirka ah oo lagu wareejiyo arrimaha jirka. Markaa unugga xiddig-buluugga ee gacanta gacanta jirka ee la gooyey awood uma lahan in laftiisa lagu dhiso maaddada jirka. Waxa ugu wanaagsan ee la sameyn karo waa in lagu dhiso unug cusub xaggiisa dambe ee jirridda sidaasna ku dhaw nabarka. Tani waxay sidoo kale sharxi doontaa sida nabarrada loo bogsado, iyo sababta nabarrada qoto dheer ay u sii jiraan haddii hilibka aan la isu keenin meel ku dhow unug si uu ugu duubto nudaha.